मानिस Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
अनौँठो खुबी भएका भाग्यमनी मानिस जसले ११ हजार भोल्टको करेन्ट सहन सक्छन् ….!!! फोटो फिचर…
[wp_ad_camp_3] भारतको हरियाणामा बस्ने १६ वर्षिय दिपकलाई ११ हजार भोल्टको विजुलीले समेत असर गर्दैन, जबकी यो विजुलीले ५०० भन्दा बढी घरलाई उर्जा दिन सक्छ। २,७०० भोल्टको एक झड्काले सामान्य मानिसको ज्यान लिन सक्छ। ३...
युगान्डाका जोन सेबुन्या, जो बाँदरले हुर्काएको मानिस हुन् !
[wp_ad_camp_3] [wp_ad_camp_5] चाल्र्स डार्बिनको विकासवादी सिद्धान्तले भन्छ– मानिसको पुर्खा बाँदर हो । यो सिद्धान्तप्रति असहमति जनाउनेहरू पनि छन् । तर, युगान्डाका जोन सेबुन्यालाई हेर्ने हो भने डार्बिनको सिद्धान्त ठीक हो झैँ लाग्छ । किनकि...
चुम्बकीय मानिस: Georgian मानिस ले शरीरमा ५३ ओटा चम्चा राखेर बिश्व रेकर्ड (भिडियो सहित)